Kedu ihe kpatara ụlọ ọrụ gị kwesịrị iji mejuputa Mkparịta ụka Ndụ | Martech Zone
Anyị tụlere ọtụtụ uru ijikọ ọnụ nkata ndụ na weebụsaịtị gị na otu nke anyị ahịa pọdkastị. Jide n'aka na-akụ na! Mkparịta ụka ndụ na-akpali mmasị na ọnụ ọgụgụ na-egosi na ọ nwere ike ọ bụghị naanị inye aka mechie azụmahịa, ọ nwekwara ike melite afọ ojuju ndị ahịa na usoro ahụ.
Ndị ahịa chọrọ enyemaka mana, n'uche nke m, ha achọghị ịgwa ndị mmadụ okwu n'ezie. Callkpọ oku, ịgagharị n’osisi ekwentị, ichere, na ịkọwara mmadụ okwu na ekwentị nwere ike iwute gị. Site na oge onye nnọchi anya ndị ahịa na-aza, onye ahịa ahụ ewela iwe. Mkparịta ụka ndụ na-enye oge mkpebi ngwa ngwa na azịza ngwa ngwa - na-enye ezigbo ahụmịhe ndị ahịa.
Mkparịta ụka ndụ na-adịwanye mkpa ma baa uru dị ka ikpo okwu ndị ahịa. N'ezie, na nyocha emere Forrester, 44% nke ndị zaghachiri kwuru na inwe onye dị ndụ na-aza ajụjụ ha mgbe ha nọ n'etiti ịzụrụ ihe n'ịntanetị bụ otu n'ime atụmatụ ndị kachasị mkpa weebụsaịtị nwere ike ịnye.
Uru ndị ọzọ nke ụlọ ọrụ ndị jikọtara nkata ndụ gụnyere:
Salesrịbawanye ire - 51% nke ndị ahịa nwere ike ịzụta. 29% nke ndị na-azụ ahịa nwere ike ịzụrụ ihe na nhọrọ nke nkata ndụ ọ bụrụgodị na ha ejighị ya.
Conversionba ụba ntụgharị - Rescue Spa mụbara ngbanwe ha site na 30% na nkata ndụ.
Mụbara njigide - 48% nke ndị ahịa nwere ike ịlaghachi na weebụsaịtị.
Enwekwu aha ọma - 41% nke ndị na-azụ ahịa na ntanetị na-atụkwasị obi na ika ahụ mgbe ha hụrụ nkata ndụ.
Inwekwu ahụmịhe ndị ahịa - 21% nke ndị ahịa na-ekwu na nkata na-enyere ha aka ịzụ ahịa mgbe ha na-arụ ọrụ. 51% nke ndị ahịa na-ahọrọ ya iji kwe ka ọ dị mfe ịme ọtụtụ ihe mgbe ị na-eche.
Live Chat Platform na enye
Companiesfọdụ ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ahụ bụ BoldChat, Nyochaa, PịaDesk, Comm100, EnyemakaOnClick, Tinye, Kayak, Ndụ Nkata Inc., Ndụ2Chat, Ndụ Enyemaka Ugbu a!, LivePerson, My LiveChat, Olark, SightMax, Mgbapụ, TouchCommerce, Onye ọrụ, Velaro, WeebụsaịtịAlive, OnyeIke na - ndị okike nke ihe omuma ihe a - Zopim (na Zendesk).
Nke a bụ ihe nkọwa zuru oke zuru oke site na Nrụpụta Ihe Weebụ, Ebumnuche 101 Ihe Mere I Ji Dị Mkpa Inabata Live Chat:
Tags: BoldChatika ahaikoriNyochaaPịaDeskComm100akakabaredeahụmahụ ahịaEnyemakaOnClickTinyeKayako Fusionnkata ndụNdụ Nkata Inc.Ndụ2ChatLivePersonMy LiveChatOlarknjigideNkwado ire ahịaMgbapụOnye ọrụVelaroweebụsaịtị NrụpụtaWeebụsaịtịAliveOnyeIkeOnyebuchiZopim
Nov 1, 2016 na 5:54 AM
Ihe omimi! Ana m ahụ ya n'anya mgbe niile ebe nrụọrụ weebụ nwere njirimara nkata ndụ, na-eme ka ọ dị mfe ịnweta nkwado na-adị mfe.
Dee 28, 2016 na 4: 51 AM
Ọmarịcha ederede edere banyere Live chat iji mee ka ntụgharị na afọ ojuju ndị ahịa bawanye. M na-eji Live chat ngwá ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ m ntụgharị ọnụego m mụbaa 70% na ihe dị mkpa karịa ajụjụ ndị ahịa m na-aza na oge afọ ojuju ndị ahịa na-abawanye.